I-Bubble Shooter 🥇 Ngena kwaye wonwabe kwi-emulator
Bubble Shooter ngumdlalo we-Android kunye ne-iOS ofuna ukucinga ngokukhawuleza kunye nokujolisa ngqo. Umdlalo unembonakalo enemibala kunye nomdlalo olula kakhulu. Jonga iingcebiso zethu kwaye ufunde ukudlala lo mdlalo ulikhoboka.
Idlalwa njani Bubble Shooter 🙂
Ukudlala iBubble Shooter kwi-intanethi simahla, kufuneka nje landela le miyalelo inyathelo ngenyathelo:
2 nyathelo. Nje ukuba ungene kwiwebhusayithi, umdlalo sele uza kuboniswa kwiscreen. Kufuneka kuphela ukudlala umdlalo kwaye ungaqala ukukhetha uqwalaselo oluthanda kakhulu. Nje ukuba uphumelele umdlalo unganyusa umgangatho. Kukho amanqanaba ama-5 ewonke.
Inyathelo le-4. Ukuphelisa onke amaqamza kumdlalo.
Yintoni iBubble Shooter? 🤓
Ibhola lokudubula yenye ye imidlalo yokudibana I-bubble shooter eyaziwayo kakhulu eyaziwayo, ngenxa yokudlala kwayo lula kwaye inomdla kakhulu. Ungayitsho loo nto Ngumxube we eminye imidlalo emibini edumileyo efana ne "tetris" kunye "nokudibanisa ezine", eyenza iBubble Shooter ibe ngumdlalo omnandi kakhulu.
Injongo I-Bubble Shooter ilula kakhulu: qokelela amanqaku amaninzi kangangoko kunokwenzeka ukutshabalalisa amaqamza anemibala. Ukutshabalalisa amaqamza, kufuneka uqhagamshele ubuncinci amaqamza amathathu ombala ofanayo.
Imbali ye bubble shooter 🙂
Kumnandi kwaye kuyathandwa umdlalo wepuzzle esidlale ngayo sonke ngexesha elithile. Nangona kunjalo, uninzi alwazi ukuba iingcambu zalo zikumdlalo ophume kwi IArcades zaseJapan kwii-80s, kwaye ekuqaleni yayibizwa ngokuba yiBubble Bobble. Kwakungekho i-90s ifikelele kwiNtshona, kodwa kunye notshintsho oluthile kumdlalo wokuqala.
Bubble Bobble Yakhishwa ngo-1986 kwiindawo zokulwa zaseJapan. Kuyo, iidragons ezimbini ezincinci, uBub noBob, bajongana no isenzo sodelo-ngozi, Ngezinye izinto ze iipuzzle kunye nokulwa neentshaba Umxholo kwinqanaba ngalinye.
Ngomzobo ngokwexesha, kunye nokukhumbuza iikhathuni zaseJapan, i juego wema ngaphandle kwintengiso ngokuba imnandi kwaye iyabhadaza, Into ebalulekileyo kwi-arcade. Ngapha koko, ibiyenye yeemidlalo zokuqala ukusebenzisa umxholo we "iziphelo ezininzi", Into eya kuduma kuphela kwimidlalo yanamhlanje. Kuxhomekeke ekusebenzeni komdlali, ukuphela kwe-adventure kunokuba ngokwahlukileyo
Njengasekuqaleni, umdlalo wawuphumelele eJapan, kwi1994, inkampani yokuvelisa iTaito igqibe kwelokuba ihlangule abalinganiswa bayo abadumileyo kwaye ibakhulule kwisihloko esitsha. Eli xesha libiziwe Iphazili Bubble, kunye neepuzzle zobuchwephese obusulungekileyo. Umdlalo wawubetha kwangoko.
Ngale nguqulo intsha, bakwazile ukwenza into eyahlukileyo kuleyo babeyiqhelile. Babeka bucala amaqonga aneentshaba ukusenza singene Umdlalo wepuzzle wamaqhekeza afanayo ombala ofanayo ukufumana amanqaku. Kodwa, ngokungafaniyo neTetris, enye hit yexesha, iziqwenga zazivela emazantsi phezulu, Ikhutshwe nguBub noBob.
Ukuba ugcwalisa isikrini ngamaqhekeza uya kufumana uMdlalo ongaphezulu. Phakathi kweziqwenga ezaphoswa, ezazingamabhamu amanzi, yayizizikhohlisi zomdlalo weklasikhi ukuba kubhekiswe kuwo.
Abadlali ababini Banokuthatha inxaxheba ngokubambisana kwaye bafumane amanqaku kunye. Umbono yayikukwazisa abalinganiswa beshumi leminyaka elidlulileyo kwisizukulwana esitsha sabadlali, kodwa ngeli xesha ngobuso obutsha. Kwaye kuyasebenza.
Iindidi zeBubble Shooter ⭐
Kukho iinguqulelo ezingaphezu kwama-30 zalo mdlalo odumileyo, kodwa ezona zichaphazelekayo zenzelwe iiconsole zevidiyo:
I-Ultra Bust-A-Hambisa kunye iphazili IBobble Ebukhoma yeXbox console.
Bust-A-Hambisa I-Deluxe yePSP.
Iphazili Bobble kwi-Intanethi ngokukodwa kwi-PC.
Ibhola lokudubula, simahla.
Kubo bonke abakhankanyiweyo, ngaphandle kwamathandabuzo, eyona mpumelelo ye-Bust-A-Move yile Bubble Bhalobhasha
Bubble Shooter ine jonga ngokulula ngesindululo esithe ngqo. Ngeli xesha umdlalo awuchaphazeli kangako ngokufaka izinto zakudala zoluhlu lwaluphefumlelwe, kodwa endaweni yoko, ngokugcina Umdlalo wokulutha lonto yenze ukuba ithandwe.
Umdlalo ugcina iskimu sokuphosa ii-spheres phezulu kunye notolo, ukutshatisa imibala yazo, kunye nesiphawuli senqaku. Umahluko omkhulu kukuba Ibhola lokudubula linikezelwa simahla kwiibhrawuza okanye usetyenziso lweselfowuni, ngelixa eyalo indalo yenzelwe iikhonsoli zomdlalo okanye iPC.
Imigaqo yeBubble Shooter 😍
Eyona nto iphambili injongo kwiBubble Shooter yiyo susa zonke iibhola ezinemibala ukusuka kwiscreen sokudubula iibhola ezinemibala ngenkanunu.
Khumbula kufuneka Tshatisa ubuncinci iibhola ezintathu zombala ofanayo ukwenzela ukuba zonke ezi zinto ziqhume, kwaye ngenxa yoko siphelise isikrini nazo zonke iibhola zisuswe. Imibala ye Iibhola eziphuma emgqonyeni zingahleliwe, ke akukho lula njengoko kuvakala.
Ukwenza oku, kuya kufuneka uchukumise iscreen kwicala ofuna ukudubula ngalo ngenkankulu uthathela ingqalelo umbala webhola edutyuliweyo ukufumana ukulingana kwayo.
Ukongeza ekubeni neyethu ikhono Xa ukhetha indawo oza kubeka kuyo iibhola, kukwabaluleke kakhulu ukuba ube nazo injongo entle. Ukucinga ngokungalunganga okanye kwicala elingalunganga kunokukhokelela kwiziphumo ezibulalayo.
Kuya kufuneka ulumke kuba ukuba imiqolo yeebhola ezinemibala ifikelela kwi-canyon, ulahlekile umdlalo kwaye kufuneka uqale phantsi.
Ukuba zimbalwa iibhola ezishiyekileyo ukugqiba umdlalo, okanye imibala yebhola ephume emgqonyeni ayikuncedisi ekupheliseni iibhola, siza kukubonisa oku iqhinga.
Beka iibhola ezinemibala ukuba awunomdla kwinto enye (okanye enye) yombala ofanayo osele unawo kwiscreen, umzekelo kwiibhola ezimbini iintyatyambo Ezi bhola zokuqala iya kusebenza njengesiseko koku kulandelayo, kwaye nje ukuba ufumane loo mbala kufuneka qhekeza eso siseko, Zonke iibhola ezikuyo ziya kuthi shwaka.
Ngale ndlela unokuwugqiba umdlalo ngokuphumelela kwaye uthintele iibhola ekufikeleleni kwi-cannon ebangela ukuba ulahlekelwe.